အချစ်ဆိုင်ရာ Archives - Myanamr Express
— အခ်စ္ဆိုင္ရာ, အချစ်ဆိုင်ရာ —
လက္ရွိမွာ ခိုင္မာတဲ့ အခ်စ္ေရးကို တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၿပီဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ အခ်က္ေလးေတြ
သင္ေရာ ခိုင္မာတဲ႔အခ်စ္ေရးကိုတည္ေဆာက္နိုင္ျပီလား … Read More လက္ရွိမွာ ခိုင္မာတဲ့ အခ်စ္ေရးကို တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၿပီဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ အခ်က္ေလးေတြ
— အချစ်ဆိုင်ရာ, အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ —
မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးနိုင္တဲ့ ေယာက်ၤား ၄ မ်ိဳး
ဒီလိုေယာက်ၤားမ်ိဳးေတြဆိုေ၀းေ၀းကေရွာင္ျကပါအမ်ိဳးသမီးအေပါင္းတုိ႔ေရ……… Read More မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးနိုင္တဲ့ ေယာက်ၤား ၄ မ်ိဳး
— အချစ်ဆိုင်ရာ —
Six-Pack မရွိတဲ့ေယာက္်ားေတြက ပို၍စြဲေဆာင္မႈရွိဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝန္ခံ
ေကာ္ရီး six pack မရွိလို႔စိတ္မညစ္နဲ႔ေနာ္ ေစာ္ေလးေတြက 1 pack လည္းရတယ္။… Read More Six-Pack မရွိတဲ့ေယာက္်ားေတြက ပို၍စြဲေဆာင္မႈရွိဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝန္ခံ
ေယာက်ာ္ေလးေတြ တကယ္ခ်စ္မိရင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အရာမ်ား
ဒီလိုေကာင္ေလး ရထားၿပီဆိုရင္ လက္မလႊတ္ေတာ့နဲ႔ေနာ္ ခ်စ္တို႔ေရ။
… Read More ေယာက်ာ္ေလးေတြ တကယ္ခ်စ္မိရင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အရာမ်ား
အရာရာခြားနားနေပေမယ့် အချစ်တွေထပ်တူကျနေတဲ့ စုံတွဲ
အချစ် မှာ မျက်စိ မပါဘူးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရှိသလို ဖူးစာ ပါရင် ဆုံကိုဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို စကားပုံတွေနဲ့ ကိုက်ညီလောက်အောင် ချစ်ကြကြိုက်ကြတဲ့ စုံတွဲလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
… Read More အရာရာခြားနားနေပေမယ့် အချစ်တွေထပ်တူကျနေတဲ့ စုံတွဲ
ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ !
စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။… Read More ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ !
အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက် Night Out မဟုတ်တဲ့ နိုက်ဒိတ်(Night Date)ရဲ့အားသာချက်များ
အိမ်ထောင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် လက်ထပ်ပြီးသွားရင် အားလပ်ရက်ဒါမှမဟုတ် ချစ်သက်တမ်းနှ စ်ပတ်လည်နေ့တွေလောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အပြင်ထွက်လည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ … Read More အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက် Night Out မဟုတ်တဲ့ နိုက်ဒိတ်(Night Date)ရဲ့အားသာချက်များ
သူငယ်ချင်းချစ်သူဆိုတဲ့ ချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်
သူငယ်ချင်းမျိုးကိုမှ သူငယ်ချင်းတင်မကဘဲ သူငယ်ချင်း ချစ်သူလေးအဖြစ်ပါ ပိုင်ဆိုင်ရမယ် ဆိုရင်တော့ တစ်လောကလုံးမှာ ကံအကောင်းဆုံးလူသားလို့ ဆိုနိုင်ပါပြီ။… Read More သူငယ်ချင်းချစ်သူဆိုတဲ့ ချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်
— Lifestyle, အချစ်ဆိုင်ရာ —
ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသူတွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ(၇)မျိုး
လူတွေ ကိုယ့်ဘဝထဲကို ဝင်လာကြပြီး အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်ဘေးကနေပြန်ထွက်သွားကြတာ သဘာဝပါ။ ကိုယ့်ဘဝထဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါလာသလို၊ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ပါလာတာပါပဲ။ … Read More ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသူတွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ(၇)မျိုး
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မှာမဟုတ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်သော မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ခု
မိန်းကလေး တွေဟာ အရမ်း ချစ်မိသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဘာကိုမှ မမြင်နိုင်တော့ လောက်အောင် အချစ်ကို ကိုးကွယ်တတ် ကြပါတယ် . . .… Read More အချစ်ကို ကိုးကွယ်မှာမဟုတ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်သော မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ခု